समाचार Archives - Page 267 of 408 - Like For Nepal
सुर्खेतमा यसरी भएको थियो ज्ञानेन्द्र माथी आ क्रमण,घ टनाबारे डिएसपीको बयान
सुर्खेतमा यसरी भएको थियो ज्ञानेन्द्र माथी आ क्रमण,घ टनाबारे डिएसपीको बयान। यो पनि पढ्नुहोस। छोरिले आफ्नो घर छोडेर प रा याको घर जाने प्रचलन परापुर्व कालदेखिनै चलायमान प्रथा हो जसलाई बिवाह नामकरण गरियो र जुन तपाईं हाम्रो घर गाउमा चलिनेरहेको छ ।छोरी मान्छे भएपछि अरुको घर जानैपर्ने अवधारणा सहित यो अनन्त का ल सम्म निरन्तर रहने र सो रहेमात्रै भाविपुस्ताहरुले आफ्नो ठाउँ पाउने कुरो सत्य हो सामाजिक संजालमा हामिले चेलिले आफ्नो घर छोडेर सो घरलाई माइति बनाउदैगर्दा बिदाईको बेला धेरै चेलिहरु भा वु क भएको नै पाउछौ ।किन मन न दु खोस् जुन घर आफ्नोे थियो अब त्यो माइति भयो ,मान्छे उहीँ छन् तर सम्बन्ध फरक भयो ।त्यस्तै कुनै बेहुलि भने बिदाईको बेला नाच्दै ,गाउदै ,रमाउदै गएको पनि हामीले सामाजिक संजालमै देखेका छौ । हो त्यस्तै नै भयो बेहुलिको बिदाई हुँदै गर्दा उनी एकदमै भा वु क भइन र गहभरि आँसु पार्...
दुखत खबर ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि फेरि निर्घा`त कु टपी`ट, गाडीमा यसरी धरधरी रोए (भिडियो सहित)
ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि फेरि निर्घा`त कु टपी`ट, गाडीमा यसरी धरधरी रोए (भिडियो सहित) समाजिक अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाही माथि फेरि निर्घात कु|टपि`ट भएको छ ।स्वास्थ्य सामग्री लिएर सुर्खेत पुगेको शाहीको टीम माथि अज्ञात समुहले रातको समयमा नि`र्घात कु`टपि`ट गरेको हो । कुट`पि`टमा ज्ञानेन्द्र शाही, गाडीका ड्राइभर लगायत अन्य सख्त घाइ`ते भएका छन् । कु`टपि`ट लगत्तै प्रहरी आइपुगे पनि प्रहरीले कुनै किसिमको सहयोग नगरेको शाहीले आरो|प लगाएका छन् । उनले भनेका छन्, प्र|हरीले पीड`क पक्ष लाई जस्ताे हामीलाई घेरा बन्दि राखेर केरकार गर्यो तर आक्र`मण कारीलाई भगायो ” । केपि शर्मा ओली पक्षका कार्यकर्ताले कु`टपि`ट गरेको दाबी शाहीको छ । कु|टपि`ट लगत्तै सामाजिक अभियन्ता हेमराज थापाको टोली ज्ञानेन्द्र शाही लाई भेट्न पुगेको थियो । एउटा भिडि`योमा देखिए अनुसार ज्ञानेन्द्र शाही चडेको गाडि का ड्राइभर को टाउको तथा शरीर मा ग...
Exclusive: नया खुलासा साबित भण्डारीको बुढाको पहिलो श्रीमतीकी दाजु भाउजु मिडियामा बोले एस्तो कुरा।
Exclusive: नया खुलासा साबित भण्डारीको बुढाको पहिलो श्रीमतीकी दाजु भाउजु मिडियामा बोले एस्तो कुरा। यो पनि पढ्नुहोस। एक जना युवतीले दुई पुरुषसंग एकै दिन कसरी विवाह गर्न गर्छ । सुसन तामागं उर्लावारी, राजु लिम्बुको जिवनमा यस्तै घटना भएको छ । उनीहरुकी श्रीमतीको नाम रिमा आले मगर हो । यो संयोग नाममा मात्र होइन ति युवती एउटै हुन् । उनीहरु दुवै जनाको विवाह दर्ता छ विवाह दर्तामा मिति एकै दिन छ । विवाह दर्ता गरेर पैसा लिएपछि अचानक रिमा आले हराइन् । एक जना श्रीमान रिमालाई खोज्न थाले । यसरी हिड्दा उनले रिमाकै अर्का श्रीमानलाई पनि फेला पारे । अहिले रिमाका दुई श्रीमान संगै मिडियामा आएका छन् । दुई जनाले अनुसन्धान गर्दै जाँदा उनीहरुजस्तै अरु पनि रहेको थाहा पाएका छन् । हामीले अहिले सम्म ८ जना अरु युवक पनि हामीजस्तै पीडित भएको थाहा पाएका छौं । विदेश जाने चाहनाले उनीहरुलाई यस्तो बनाएको हो । हगंक...
धनुषामा हेर्नुहोस:एकै पटक ५ बालिकाको पोखरिमा डु’बेर ज्या”न गयो,च”ल्यो रु”वाबास हेर्नुहोस।
धनुषामा हेर्नुहोस:एकै पटक ५ बालिकाको पोखरिमा डु बेर ज्या न गयो,च ल्यो रु वाबास हेर्नुहोस। यो पनि पढ्नुहोस। नर्भिक अस्पतालमा उपचार सुरु भएपछि मोडल निशा घिमिरेको अनुहारमा चमक देखिएको छ । जीवन मरणको दोसाधमा रहेकी उनको अस्पतालको बेडबाट ताजा तस्वीर सार्बजनिक भएको छ । जस्मा उनी मन्द मुस्कुराईरहेको महसुस गर्न सकिन्छ । उनको यस्तो अवस्थाबारे थाहा पाएपछि नर्भिक अस्पतालकि प्रबन्ध निर्देशक मेघा चौधरीले नि:शुल्क उपचारको जिम्मा लिएकी थिइन् । गएको तीन वर्षअघि अभिनयको कोर्स पढ्न भारतको देहरादून जाँदै गर्दा सडक दुर्घटनामा परी मोडल निशा घिमिरे गम्भीर घाइते भएकी थिइन् । आर्थिक अभावका कारण शरीर अस्थिपन्जरमा परिणत हुँदै गएपछि अहिले भने उनको उपचार सुरु भएको छ । मिडियामा उनको दर्द:नाक फोटो र तस्विर सार्बजनिक भएपछि उनको सो अवस्थामा राहत दिन समाजसेवी समेत रहेकी चौधरीले उद्धार गरेकी हुन् । दुर्घट, ना...
Exclusive अरु ३ केटीलाई यस्तै गरेको भिडियो बाहिर्यो ? युवती मिडियामा यस्तो भनिन् म्यासेजमा आयो एस्तो।
Exclusive अरु ३ केटीलाई यस्तै गरेको भिडियो बाहिर्यो ? युवती मिडियामा यस्तो भनिन् म्यासेजमा आयो एस्तो। यो पनि पढ्नुहोस। नर्भिक अस्पतालमा उपचार सुरु भएपछि मोडल निशा घिमिरेको अनुहारमा चमक देखिएको छ । जीवन मरणको दोसाधमा रहेकी उनको अस्पतालको बेडबाट ताजा तस्वीर सार्बजनिक भएको छ । जस्मा उनी मन्द मुस्कुराईरहेको महसुस गर्न सकिन्छ । उनको यस्तो अवस्थाबारे थाहा पाएपछि नर्भिक अस्पतालकि प्रबन्ध निर्देशक मेघा चौधरीले नि:शुल्क उपचारको जिम्मा लिएकी थिइन् । गएको तीन वर्षअघि अभिनयको कोर्स पढ्न भारतको देहरादून जाँदै गर्दा सडक दुर्घटनामा परी मोडल निशा घिमिरे गम्भीर घाइते भएकी थिइन् । आर्थिक अभावका कारण शरीर अस्थिपन्जरमा परिणत हुँदै गएपछि अहिले भने उनको उपचार सुरु भएको छ । मिडियामा उनको दर्द:नाक फोटो र तस्विर सार्बजनिक भएपछि उनको सो अवस्थामा राहत दिन समाजसेवी समेत रहेकी चौधरीले उद्धार गरेकी हुन् । ...
Exclusive:Rajesh Hamal ले धरहराको टुप्पोमा केक काट्दा विवा’दमा | दीपक भन्छन् एमाले भन्दा जसपा मालमाल
Exclusive:Rajesh Hamal ले धरहराको टुप्पोमा केक काट्दा विवा'दमा | दीपक भन्छन् एमाले भन्दा जसपा मालमाल यो पनि पढ्नुहोस। नर्भिक अस्पतालमा उपचार सुरु भएपछि मोडल निशा घिमिरेको अनुहारमा चमक देखिएको छ । जीवन मरणको दोसाधमा रहेकी उनको अस्पतालको बेडबाट ताजा तस्वीर सार्बजनिक भएको छ । जस्मा उनी मन्द मुस्कुराईरहेको महसुस गर्न सकिन्छ । उनको यस्तो अवस्थाबारे थाहा पाएपछि नर्भिक अस्पतालकि प्रबन्ध निर्देशक मेघा चौधरीले नि:शुल्क उपचारको जिम्मा लिएकी थिइन् । गएको तीन वर्षअघि अभिनयको कोर्स पढ्न भारतको देहरादून जाँदै गर्दा सडक दुर्घटनामा परी मोडल निशा घिमिरे गम्भीर घाइते भएकी थिइन् । आर्थिक अभावका कारण शरीर अस्थिपन्जरमा परिणत हुँदै गएपछि अहिले भने उनको उपचार सुरु भएको छ । मिडियामा उनको दर्द:नाक फोटो र तस्विर सार्बजनिक भएपछि उनको सो अवस्थामा राहत दिन समाजसेवी समेत रहेकी चौधरीले उद्धार गरेकी हुन् । ...
तपाई केरा खादै हुनुहुन्छ ! बजार अनुगमनमा देखीयो यस्तो हालेको, पोखरामा हेर्नुहोस Exclusive
तपाई केरा खादै हुनुहुन्छ ! बजार अनुगमनमा देखीयो यस्तो हालेको, पोखरामा हेर्नुहोस Exclusive यो पनि पढ्नुहोस। नर्भिक अस्पतालमा उपचार सुरु भएपछि मोडल निशा घिमिरेको अनुहारमा चमक देखिएको छ । जीवन मरणको दोसाधमा रहेकी उनको अस्पतालको बेडबाट ताजा तस्वीर सार्बजनिक भएको छ । जस्मा उनी मन्द मुस्कुराईरहेको महसुस गर्न सकिन्छ । उनको यस्तो अवस्थाबारे थाहा पाएपछि नर्भिक अस्पतालकि प्रबन्ध निर्देशक मेघा चौधरीले नि:शुल्क उपचारको जिम्मा लिएकी थिइन् । गएको तीन वर्षअघि अभिनयको कोर्स पढ्न भारतको देहरादून जाँदै गर्दा सडक दुर्घटनामा परी मोडल निशा घिमिरे गम्भीर घाइते भएकी थिइन् । आर्थिक अभावका कारण शरीर अस्थिपन्जरमा परिणत हुँदै गएपछि अहिले भने उनको उपचार सुरु भएको छ । मिडियामा उनको दर्द:नाक फोटो र तस्विर सार्बजनिक भएपछि उनको सो अवस्थामा राहत दिन समाजसेवी समेत रहेकी चौधरीले उद्धार गरेकी हुन् । दुर्घट, नाप...
यो घर भित्र के भयो हेर्नुहोस _२३ बर्से सुर्य कुमारीको मुटुमा ठुलो प्वाल रहेछ Tuki Nepal Help video
यो घर भित्र के भयो हेर्नुहोस _२३ बर्से सुर्य कुमारीको मुटुमा ठुलो प्वाल रहेछ Tuki Nepal Help video यो पनि पढ्नुहोस। टेलिभिजन रियालिटी शो ‘द लिडर’को औपचारिक घोषणा १ वर्ष अघि गरिएको थियो । ‘को बन्छ करोडपति’ सञ्चालनमा ल्याएको ‘एसआरबीएन’ मिडि’याले प्रसारण गर्न लागेको कार्यक्र’मको गत वर्ष मंसिर २५ गते काठ’माण्डौमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत घोषणा गरिएको हो । कार्यक्रममा को तयारी गर्दा गर्दै कोरोना महा’मारीले उक्त कार्यक्रम प्रभावित भयो । कार्यक्रम कहिले हुन्छ भन्ने मिती तोक्न कोरोना को सामान्य हुने अवस्था कुर्नु पर्ने छ । ‘द लिडर’ कार्यक्रमका प्रस्तोता रवि लामि’छानेले सञ्चालन गर्ने बताएको छ । कार्यक्र’मको निर्याण’कमा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्व प्रधानन्या’याधिश सुशी’ला कार्की, पूर्व पत्रकार तथा नेता रविन्द्र मिश्र रहनेछन् । कार्यक्रम न्यूज २४ टेलिभि’जन साथै रमा’इल...
रसुवावासीको पीडा खाद्यान्न लत्ताकपडाका लागि काठमाडौंको भर || Nepal Times
रसुवावासीको पीडा खाद्यान्न लत्ताकपडाका लागि काठमाडौंको भर || Nepal Times यो पनि पढ्नुहोस। टेलिभिजन रियालिटी शो ‘द लिडर’को औपचारिक घोषणा १ वर्ष अघि गरिएको थियो । ‘को बन्छ करोडपति’ सञ्चालनमा ल्याएको ‘एसआरबीएन’ मिडि’याले प्रसारण गर्न लागेको कार्यक्र’मको गत वर्ष मंसिर २५ गते काठ’माण्डौमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत घोषणा गरिएको हो । कार्यक्रममा को तयारी गर्दा गर्दै कोरोना महा’मारीले उक्त कार्यक्रम प्रभावित भयो । कार्यक्रम कहिले हुन्छ भन्ने मिती तोक्न कोरोना को सामान्य हुने अवस्था कुर्नु पर्ने छ । ‘द लिडर’ कार्यक्रमका प्रस्तोता रवि लामि’छानेले सञ्चालन गर्ने बताएको छ । कार्यक्र’मको निर्याण’कमा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्व प्रधानन्या’याधिश सुशी’ला कार्की, पूर्व पत्रकार तथा नेता रविन्द्र मिश्र रहनेछन् । कार्यक्रम न्यूज २४ टेलिभि’जन साथै रमा’इलो टी’भी एचडी र गुन्द्रुक ए...
दु:खत खबर,असार १ गते बाट खुल्छ भनेको लकडाउन फेरि २ हप्ता थपियो,देशभर सबै बन्द गर्ने घोषणा
दु:खत खबर,असार १ गते बाट खुल्छ भनेको लकडाउन फेरि २ हप्ता थपियो,देशभर सबै बन्द गर्ने घोषणा यो पनि पढ्नुहोस। टेलिभिजन रियालिटी शो ‘द लिडर’को औपचारिक घोषणा १ वर्ष अघि गरिएको थियो । ‘को बन्छ करोडपति’ सञ्चालनमा ल्याएको ‘एसआरबीएन’ मिडि’याले प्रसारण गर्न लागेको कार्यक्र’मको गत वर्ष मंसिर २५ गते काठ’माण्डौमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत घोषणा गरिएको हो । कार्यक्रममा को तयारी गर्दा गर्दै कोरोना महा’मारीले उक्त कार्यक्रम प्रभावित भयो । कार्यक्रम कहिले हुन्छ भन्ने मिती तोक्न कोरोना को सामान्य हुने अवस्था कुर्नु पर्ने छ । ‘द लिडर’ कार्यक्रमका प्रस्तोता रवि लामि’छानेले सञ्चालन गर्ने बताएको छ । कार्यक्र’मको निर्याण’कमा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्व प्रधानन्या’याधिश सुशी’ला कार्की, पूर्व पत्रकार तथा नेता रविन्द्र मिश्र रहनेछन् । कार्यक्रम न्यूज २४ टेलिभि’जन साथै रमा’इलो टी’भी एचडी...
Previous 1 … 266 267 268 … 408 Next